Grey rot | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Grey rot
Inona no olana mahatsiravina sy ny fomba hanasitranana izany
Ny ahi-maitso dia ampy amin'ny aretina sy ny bibikely. Saingy miatrika aretina mampidi-doza izy. Azo sitranina amin'ny fitsaboana sahaza, ny fisorohana ary ny fifehezana amin'ny fotoana mety ny aretina Gooseberry. Mealy dew: ahoana no hiatrehana ny aretin'ny gaza? Matetika, io aretin'ny bibikely io dia miseho eo amin'ny tsiranoka amin'ny endriky ny fotony fotsy izay mandrakotra ny voankazo.
Iza ary inona no manimba ny fimamoana
Ny fihinanan-kena dia kolotsaina velona tahaka ny ovy eo amin'ny voatabia. Noho izany, voan'ny viriosy samihafa, bakteria sy bibikely izay mety hanimba ireo zavamaniry ireo. Tsara kokoa ny manamarika sy misoroka ny fivoaran'ny aretina amin'ny fotoana toy izay miandry mandra-pahatongan'ny tenany. Ny voka-dratsy sy ny aretina sasany dia mety hitarika amin'ny fandringanana ny kirihitra, izay hahagaga anao tampoka.
Azo antoka ny filazana fa samy manana trano trano ao an-trano avokoa ny olona tsirairay, fa ny mponina ao amin'ny firenentsika kosa dia manana fitiavana manokana amin'ny geranium. Fantatrao ve? Ny trano geranium dia antsoina koa hoe "pelargonium". Ny aretin-tena lehibe indrindra amin'ny Geranium Geranium, toy ny zavamaniry hafa, dia manana fahavalo maro. Ny aretina isan-karazany sy ny bibikely dia mety hiteraka fiantraikany lehibe amin'ny efitrano geraniums.
Ny tsikombakomba mitombo ao chubushnik ao amin'ny tranokalany
Chubushnik dia zavamaniry iray an'ny fianakaviana Hortensia. Io kirihitra io miaraka amin'ny voninkazo fotsy sy ny fofona mamy tsara dia mety hikorontana amin'ny jasmine. Ity lahatsoratra ity dia momba ny antony tokony hambolena zaridaina jasmine sy ny fomba hanaovana azy. Hodinihinay koa ny fikarakarana tsara azy ireo sy ny karazana famokarana ary ny vanim-potoana amin'ny taona raha toa ka mendrika ny hamboly pince.
Ireo toetra mampiavaka ny mpampiantrano ao an-jaridaina
Ny mpamorona tia ny mpanakanto dia tsy ho an'ny ravina tsara tarehy mahafinaritra, fa koa ho an'ny tsy misaina. Na izany aza, mamela be dia be ny ravinkazo. Mamorona lamaody mahafinaritra mahavariana ho an'ny zavamaniry hafa izy ireo, ary mahaliana tokoa ny voninkazo amin'ny zavamaniry. Fantatrao ve? Avy amin'ny anarana latinina Hosta ny Khost ary manana anarana hafa - funky.
Garden Gerbera: fambolena sy fiahiana
Gerbera dia zavamaniry isan-taona ao amin'ny fianakaviana Compositae. Misy karazany maro ny gerberas, izay miavaka amin'ny loko, tavy ary ny karazam-batana. Andeha hojerentsika ny fanontaniana momba ny habetsahan'ny gerbera maniry, ny fomba hambolena sy fikarakarana azy ireo. Ny karazana varimbazaha varimbazaha malaza indrindra androany, ny karazany 80 amin'io voninkazo tsara tarehy io dia fantatra.
Ny aretina sy ny bibikely manomboka amin'ny begonias: ny famaritana sy ny fomba fiatrehana azy ireo
Anisan'ireo zavamaniry ao anaty atody, begonia dia iray amin'ireo malala indrindra, satria tsy ny raviny tsara tarehy ihany no manavaka, fa ny ravina mahafinaritra ihany koa. Fa ny fikarakarana an'io zavamaniry io dia mitaky be loatra, ka eo ambany no hifanakalozantsika ireo aretina malaza amin'ny begonias sy fahadisoana amin'ny fambolena azy. Ny olana amin'ny fanombohan-jaza mendri-kaja noho ny tsy fitomboan'ny toe-pahasalamana sy ny fikarakarana azy ireo. Ny olana mahazatra amin'ny fitombon'ny fitomboana dia noho ny tsy fitandremana ny voninkazo.
Chrysanthemum - voninkazo samurai
Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny "vonin'ny samurai" - chrysanthemum. Hiresaka momba ny fomba hikarakarana ny krysantome, ny fitiavan'izy ireo ny tany ary ny hamafin'ny matetika ny rano. Eritrereto ny voka-dratsy azo atao ary ampianaro izy ireo hiady. Hambaranay aminao ny fomba hahatratrarana ny voninkazo marevaka ny krysantome. Fantatrao ve?
Ny aretina sy ny bibikely ratsy, ny olana lehibe amin'ny fitomboany
Melon dia mety ho voan'ny aretina azo avy amin'ny bibikely, bakteria ary virioma, izay mitarika ho amin'ny fihenan'ny vokatra sy ny vokatra. Ny karazana bibikely samihafa miompana amin'ny soritr'aretin'ity zavamaniry ity dia mahatonga azy ho ratsy ihany. Noho izany, ilaina ny mahafantatra momba azy ireo. Androany isika dia mijery ireo aretina mahazatra indrindra amin'ny melons sy ny fomba itondrana azy ireo, ary koa miresaka momba ny bibikely melons sy ny fomba hiadiana amin'izy ireo.
Ahoana no fisorohana sy fitsaboana orkide ho an'ny aretina?
Androany, ny orkide dia tsy zavamaniry tsy fahita firy ao amin'ny zaridaina voninkazo. Na izany aza, dia misy aretina isan-karazany ary mitaky fikarakarana manokana. Mampalahelo fa sarotra ny mahita fampahalalana tanteraka momba ny fikarakarana voninkazo, aretina orkide ary ny fitsaboana azy ireo. Noho izany dia niezaka ny nanararaotra ny olana iombonana sy ny fahasarotana amin'ny orkide mitombo.
Ahoana no hiatrehana ny aretina mainty?
Ny fonenana voajanahary matevina, kirihitr'ireo tsilo mikararana sy ny volon'ireo mainty mainty dia lehibe - Amerika Avaratra sy Eurasia. Ny asa fiompiana mavitrika indrindra momba ny fambolena karazam-boankazo dia natomboka nanomboka tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo tany Etazonia (karazany 300 mahery no nentina). Mihamitombo ny lazan'ny vokatra aty amin'ny firenentsika - ny fitomboan'ny mpamboly dia manomboka mankasitraka ny jiro ho azy: mamy mahafinaritra sy mahafinaritra; pitsaboana sy fisotroan-dronono; avo rendrarendra; ny tsy fisehoana ivelany sy ny fikarakarana fikarakarana; fahalemena malemy.
Areti-mando-dronono: fisorohana, famantarana ary fitsaboana
Miaraka amin'ny fiandohan'ny fahavaratra dia miandry fatratra ny fijinjana ny akoho. Na dia izany aza, malemy be ny aretim-bozaka, ary mila fepetra ny fitsaboana amin'ny fotoana. Raha tsy izany dia misy loza mitatao ho an'ny tsy fihinana. Ity lahatsoratra ity dia mamaritra ireo aretina voajanahary mahazatra indrindra, ny famantarana, ny fitsaboana ary ny fisorohana ny fomba izay hanampy anao hamonjy ny trondro ary hankafiziny ny tsiron'Andriamanitra.
Ny aretina sy ny bibikely ary ny fomba hiatrehana izany
Kanna dia zavamaniry tena tiany miaraka amin'ireo mpamboly sy zaridaina manana voninkazo hafahafa. Na izany aza, mitranga ny fandikana ny canna, na dia toa tsy misy aza ny fepetra rehetra ilaina ho azy. Ny valin'ny fanontaniana hoe nahoana ny kanona no tsy mamony dia mety miovaova isaky ny toe-javatra manokana, fa ny antony iraisana kosa dia matetika amin'ny fitsaboana diso azy ireo.
Ny aretina sy ny bibikely atao amin'ny petunia: ny olana lehibe amin'ny fitomboany
Ny voninkazo petunia mahaliana sy tsara tarehy, na dia miorina amin'ny aretina isan-karazany sy mahazatra aza ny mitombo ao anatin'ny toetry ny hafanana avo sy ny hafanana, fa eo amin'ny zaridaina aloha no tena fisedrana. Ny ankamaroan'ireo voka-dratsy sy aretina dia miditra ao amin'ny zaridaina miaraka amin'ireo zana-ketsa, ka raha te hampitombo ny petunia ao amin'ny faritra misy anao ianao, dia tokony hahalala kely momba ny fomba hiatrehana ny aretina isan-karazany sy ny parasy.
Almond: fitsaboana ara-potoana ny aretina sy ny fihenan'ny bibikely
Almond - tsara tarehy atsimo amin'ny felam-boninkazo mamy sy ny vokatra tsara indrindra. Ny zavamaniry almond dia aseho amin'ny endrika hazo madinika sy hazo. Ny hazo almôdy hatramin'ny taonjato taloha no nitomboan'ny olona, ​​ary ny filazana voalohany momba ny amandy dia hita ao amin'ny soratra nataon'ny Asyrianina fahiny sy ny Baiboly. Na izany aza, ny sakafo dia tsy ampiasaina ny vokatry ny almonds ihany, fa ny taolan'ireny ihany.
Ahoana no hiarovana ny tsimokaretina amin'ny aretina?
Isika tsirairay dia te hanana hazo tonta tsara tarehy eo amin'ilay tetika. Na izany aza, io hazo io dia tena lafo sy voan'ny aretina maro. Mba hampitombo ny hatsaran-tarehy tsara tarehy sy maitso, mila manao ezaka be ianao. Ny zavatra manan-danja indrindra dia ny fikarakarana tsara. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny mety ho vokatry ny aretina sy ny aretin'ny alika kanto.
Ny tsiambaratelon'ny fampiroboroboana Brugmansia eny an-tsaha
Amin'ny lohataona any amin'ny zaridaina sasantsasany dia mahita voly tsy mahazatra toy ny dopo ianao - miaraka amin'ny voninkazo tsara tarehy sy ny fofona matanjaka. Ity hazo maitso ity - Brugmancia, vahiny avy any Amerika Atsimo. Brugmansia dia tena miloko marevaka, ary na dia ny mpamboly vao avy amboara aza dia afaka mamboly sy mikarakara izany eny an-tsaha.
Areti-mifindra maotera: fisorohana, famantarana ary fitsaboana
Na dia eo aza ny ezaka ataon'ny mpamboly mba hampivelatra ireo karazam-boaloboka izay manohitra kokoa ny aretina sy ny viriosy, dia mbola mety hampidi-doza azy ny zavamaniry. Ity lahatsoratra ity dia mamaritra ireo aretina voajanahary mahazatra indrindra, ny soritr'aretiny sy ny fomba fanaraha-maso. An Anthracnose anthracnose Rasalama dia holatra izay miseho amin'ny taha-maitso eny an-tsaha.
Ny fomba hikarakarana ny cleavia ao an-trano
Clivia, na Kaffir Lily, dia anisan'ny fianakaviana Amaryllis. Io voninkazo io dia hita ao amin'ny faritanin'i Afrika Atsimo, ary ankehitriny dia karazany telo ihany no fantatra amin'io zavamaniry io. Noho ny toetrany mampiavaka, tsy misaina sy mora vidy, dia malaza amin'ny fambolena ny klivia.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Grey rot